cagaf Electric - Shiinaha Ningbo Hilectro Power Tecnology
dayactirka 1.New motor AC free Iyada oo qoyaan-caddayn, ilaalinta ciidda-caddayn, matoorrada drive AC AC, brand-magaca baytariyada-awood sare, mar dambe saacadaha shaqada. design cuf 2.Low Aad u deggan marka aad safarka. jejebiyey 3.Electromagnetic dhigaysa howlgalka ammaan iyo ka badan la isku halayn karo 4.Side jiidaya jirka sanduuqa batari nooca Si badasho batariyada. shukaanta electronic 5.The dhigaysa howlgalka qalabka gaadiidka 6.Important raaxo badan, waayo, logistics gobol iyo wareegga workshop Inta badan ...
dayactirka 1.New AC motor free
Iyada oo qoyaan-caddayn, ilaalinta ciidda-caddayn, AC AC eryi matoorrada, brand-magaca baytariyada-awood sare, saacado dheeraad ah la shaqeeyo.
design cuf 2.Low
Aad u deggan marka aad safarka.
jejebiyey 3.Electromagnetic dhigaysa howlgalka ammaan iyo ka badan la isku halayn karo
4.Side nooca jiidaya jirka sanduuqa batari
In si ay u badasho batariyada.
shukaanta electronic 5.The dhigaysa howlgalka raaxo badan
qalabka gaadiidka 6.Important for logistics gobol iyo wareegga workshop
Inta badan loo isticmaalaa in jar garoomada diyaaradaha, saldhigyada, seminaaro, alaabta bakhaarka, sida jar Alaabtoodii
miisaanka tractive qiimeeyo
Qiimeeyo dadaalka tractive
load buundada No-load ka hor / ka dib
Taayirada (giraangiraha hore)
Turos (wheel gadaal)
ansixin dhulka ugu hooseeya ee
gacan ka leexdo Ugu Yar
Fulitaanka awoodda, load buuxa
Eryi awood motor
danab Battery / awoodda
Previous: gaari sariirtaada Electric
Next: nooca Forward stacker korontada
Electric cagaf Waayo, Sale